ဆောင်းတွင်းမှာ ရေအေးနဲ့ချိုးမလား ရေနွေးနဲ့ချိုးမလား | OnDoctor
By Ei Cho Dr.	 On Dec 5, 2018 Last updated Mar 6, 2019
အခုလိုဆောင်းရာသီချမ်းအေးသောအချိန်တွင် ရေနွေးနှင့်ရေအေး သင်ဘာနဲ့ရေချိုးမလဲ ?အဖြေကို သင်ကိုယ်တိုင်ဖြေကြည့်ပါ။ရေအေးနဲ့ချိုးရမလား? ရေနွေးနဲ့ချိုးရမလား? ရေအေးနဲ့ချိုးရင် လေဖြတ်လိမ့်မယ်ဆိုသော စကား။ရေနွေးနဲ့မချိုးနဲ့ အပူအအေးမမျှဘဲနေလိမ့်မယ်ဆိုသောစကား။ဘယ်စကားသည် အတည်ဖြစ်နိုင်လဲ?ဘယ်လိုချိုးရမလဲ?ဘာကောင်းကျိုး။ဘာဆိုးကျိုးရှိမလဲ ?အဖြေကို Ondrမှာတောင်ပေါ်ဒေသ ကလူအများ မေးလေ့ရှိပါတယ်။
တစ်နေကုန် ပင်ပန်းနွယ်နယ်လာသမျှ ရေနွေးလေးနဲ့စပ်ချိုးလိုက်ခြင်းသည် အပန်းဖြေနည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနွေးစပ်ချိုးခြင်းသည် သွေးလည်ပတ်မူကိုအားကောင်းစေပါတယ်။ကိုယ်လက်ကြွက်သား ကိုက်ခဲမူကိုပြေလျော့စေပါတယ်။
ရေအေးနှင့်ချိုးလျှင် ရေနွေးကဲ့သို့ လန်းဆန်းမူမရနိုင်သော်လည်း အခြားသောကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများရှိပါတယ်။ရေအေးနှင့်ချိုးခြင်းသည် အပျော်တမ်းအားကစားသမားများနှင့်ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများအတွက် အဓိကလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူအများစုက ပင်ပန်းနွယ်နယ်စဉ် ရေနွေးနဲ့စပ်ချိုးချင်ကြပါတယ်။
ဆောင်းရာသီချမ်းအေးနေချိန်တွင် အလုပ်သွားရန်ရှိသောကြောင့် အိပ်ရာထက်တွင် တိုးဝှေ့အိပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ထို့အချိန်တွင် ရေချိုးရန်ရေအေးကိုသာသင်ရွေးရပါလိမ့်မယ်။ရေအေးချိုးစဉ် အသက်ပြင်းပြင်းရှုရသောကြောင့် အောက်ဆီဂျင်များများရရျ် တနေကုန် လန်းဆန်းနေပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းရာသီတွင် အသားအရေနဲ့ဆံပင်များ ခြောက်သွေ့တတ်ပါတယ်။ရေနွေးနဲ့ချိုးလျှင် အဆိုပါခြောက်သွေ့မူကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။ထို့ကြောင့်ရေနွေးချိုးမလား?ရေအေးချိုးမလား?စဉ်းစားကြည့်ပါ။ရေအေးချိုးခြင်းသည် ချွေးပေါက်ကျဉ်းစေပြီးအသားအရေတင်းစေပါတယ်။
ဆောင်းရာသီတွင်ကိုယ်ခံအားကောင်းမွန်ရန်အထူးလိုအက်ပါတယ်။အခုလိုရာသီသည် အအေးမိနှာစေးတုပ်ကွေးအဖြစ်များသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ရေအေးသည် ကိုယ်တွင်းကလီစာများဆီသို့ သွေးလည်ပတ်မူအားကောင်းစေပါတယ်။ထို့ကြောငိ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုပိုမိုအားကောင်းစေပါတယ်။
အေးမြသောရေကန်အတွင်းအလျင်အမြန်ဒိုင်ဘင်ထိုးချလိုက်ပါက ယူရစ်အက်ဆစ်ကိုကျစေပါတယ်။ထို့ကြောင့် ကိုယ်တွင်းဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများလျော့ကျခြင်းကိုဟတားဆီးပေးပါတယ်။
အေးသောရာသီတွင် အခံရခက်သောဝေဒနာတစ်ခုမှာကြွက်သားနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု သို့မဟုတ် လူပ်ရှားမူတစ်ခုပြုလုပ်တိုင်း ကြွက်သားပိုနာကျင်ရပါတယ်။ရေအေးနှင့်ချိုးခြင်းသည် အကောငိးဆုံးသက်သာစေသောနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(3)သင် ဘာနဲ့ရေချိုးလျှင်အဆင်ပြေဆုံးလဲ ?
အသက်အရွယ်ငယ်လွန်သူများနှင့် ကြီးလွန်သူများအတွက် ရေနွေးနှင့်စပ်ချိုးခြင်းသည် ပိုအကျိုးများပါတယ်။
အချို့လူများသည် ရေကိုစောစောချိုးခြင်းအလေ့အကျင့်ရှိပါက ရေအေးနှင့်သာချိုးပါ။ညနေပိုင်းချိုးလျှင်ရေနွေးစပ်ချိုးပါ။လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်ချိုးလျှင်ရေနွေးနှင့်ချိုးပါ။
ထို့ကြောင့် ဆောင်းရာသီတွင် မိမိသည် ဘာနဲ့ရေချိုးသင့်သလဲ မိမိကိုယ်တိုင်စဉ်းစားရွေးချယ်ပါ။